ओलीले माधव नेपालको नाम लिएर कुल्ला गर्दा खाँटी एमाले कार्यकर्ताले बान्ता नगरे, त्यसको योग्यता पुष्टि हुँदैन : घनश्याम भुसाल | साँचो खबर Online Khabar
२०७९ अषाढ १, बुधबार (२ हफ्ता अघि)
काठमाडौं : नेकपा एमालेका नेता घनश्याम भुसालले नेपाली राजनीतिको संस्कार बिग्रिँदै गएको टिप्पणी गरेका छन्। युवा बाम बहसले बुधबार आयोजना गरेको कम्युनिस्ट आन्दोलन : संकट र अबको बाटो विषयक अन्तर्क्रियामा उनले नेताहरुको बौद्धिकतामा प्रश्न उठ्ने गरेको बताए।
‘राजनीतिज्ञ भनेको समाजका गुरुहरु हुन्। उनीहरुले बोलेका कुरा समाजले सिक्ने हो। समाजले पनि ठूलो मान्छे जता गयो, त्यतै रोज्छ। तर हाम्रो नेताहरुको बोल्नै शैली र बौद्धिकतामाथि प्रश्न उठेको छ। समाजले उनीहरुबाट राम्रो होइन, गाली सिकिरहेको छ,’ उनले भने।
उनले प्रचण्डले एमालेको पत्ता साफ गरिदिन्छु भन्नु, त्यसको विरोधमा एमाले कार्यकर्ताले लाठी लिएर उभिनु नै उनीहरुको योग्यता भएको बताए। ‘ओली कमरेडले माधव नेपालको नाम लिएर कुल्लामात्र गर्‍यो भने खाँटी एमाले कार्यकर्ताले बान्ता नगरी त्यसको योग्यतै पुष्टि हुँदैन। कमरेडले कुल्ला गर्नु्हुन्छ। कार्यकर्ताले बान्ता गर्नुहुन्छ,’ उनले प्रश्न गरे, ‘चाहेर नचाहेर त्यस्तो गर्नु नै योग्यता हो। त्यसले हाम्रो समाज कता लैजान्छ?
उनले युवाहरुमा वितृष्णा पैदा हुनुको मूल कारण मेनस्ट्रिम राजनीति भएको बताए। मूल राजनीतिज्ञहरुकै कारण युवाहरुको स्वतन्त्र उम्मेदवारी परेको र विजयी भएको समेत उनले बताए। ‘युवाहरु विद्रोहका साथ अगाडि बढिरहेका छन्। हाम्रो आन्दोलनलाई सचेतका साथ नहेर्ने हो भने भयंकर खतराहरु देखिन थालेका छन्,’ उनले भने।
उनले संसदमा अहिले पनि सबैभन्दा ठूलो शक्ति कम्युनिस्टकै रहेको बताए। ‘संसदको पहिलो पार्टी को कम्युनिस्ट? तेस्रो पार्टी को कम्युनिस्ट, पाँचौं पार्टी को कम्युनिस्ट, अनि राज गर्ने कांग्रेस,’ उनले थपे, ‘यही कारणले हामीलाई जेलेन्स्कीतिर लग्दैछ।’ उनले नेपाल युक्रेनको बाटोमा रहेको संकेत गरे। ‘अमेरिकी सेना बोलाउने, चीन नजिक लगेर छाडिदिने अनि त्यहाँ लगिसकेपछि चीनले पनि केही गर्छ,’ उनले भने।
उनले कम्युनिस्टहरु एक ठाउँमा उभिनुको विकल्प नरहेको औंल्याए। उनले आफूले ओली, प्रचण्ड र माधव नेपालसँग यसबारे छलफल गरेको समेत प्रस्ट्याए। ‘एकता वा सत्यनाश हामीसँग दुइटा बाटा छन्। चुनाव आइसक्यो त्यो असम्भव छ भन्नेहरु पनि छन्। मैले माधव कुमार नेपाल, प्रचण्ड र ओलीसँग पनि सोधेको छु। मैले भनेको छु- विचारमा प्रचण्ड र माधवजीको पार्टीभन्दा के भिन्नता छ भनिदिनुस्। बताइदिनुस् भन्दा केही छैन। छ त केवल गाली गलौज छ,’ उनले भने।